Progressive Voice Myanmar » Launch ofareport on Myanmar’s garment industry, ‘Raising the Bottom’
November 18th, 2016 • Author: •2minute read
ရှေ့ပြေးအသံအဖွဲ့သည် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ ၂၀၁၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အသွင်ကူးပြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်“အနိမ့်ဆုံးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း – မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ” ဟု အမည်ရှိသည့် ၎င်း၏ ပထမ ဦးဆုံး သုတေသနအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့ကဲ့သို့ အဓိကကျသော ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အရွယ်အစားအရ သေးငယ်နေသေးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလျက် ရှိနေပါသည်။ဤအစီရင်ခံစာတွင် လက်ရှိအလုပ်သမားရေးရာ စံချိန်စံနှုန်း များသည် အလုပ်သမားများအပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေသည်ကို အလုပ်ချိန်၊ လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ၊ အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုနှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးစသည့် အဓိကကျသောရူထောင့်အမြင် (၄) မျိုးမှ အဓိကထား ချဉ်းကပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများသည် အလွန်ပြိုင်ဆိုင်မှုများသည့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်၏ဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် သွားရမည့်ခရီးမှာ အလှမ်းဝေးနေသေးသည်ကို ဤသုတေသနအစီရင်ခံစာမှ တွေ့ရှိထားပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သောအစိုးရနှင့် စက်ရုံပိုင်ရှင်များက ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာရေးနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်မှုများ ဖော်ဆောင်လာစေရန် ဤအစီရင်ခံစာမှ တောင်းဆိုထားပါသည်။
အချိန် – နေ့လယ် ၂း၀၀ မှ ၄း၀၀ နာရီထိ
နေရာ – Best Western Green Hill Hotel၊ အမှတ် ၁၂၊ဖိုးစိန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၀) ၉၂၆ ၁၀၀ ၉၉၉၅
akm@progressive-voice.org (မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်)
“ရှေ့ပြေးအသံ” သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လို “Progressive Voice” သည် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ဆောင်သော အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းမှ အဖွဲ့များဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကွန်ရက်အဖြစ် ချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) မှ ပေါက်ဖွားလာသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
Progressive Voice is launching the first report since the transition from Burma Partnership in October 2016 titled, “Raising the Bottom: A Report on the Garment Industry in Myanmar.” While still small compared to major producers such as China and Bangladesh, Myanmar’s garment industry is growing exponentially. The report focuses on how current labor standards are affecting workers by addressing four main aspects of concern for workers including working hours, working conditions, the impact of the minimum wage as well as trade unions and labor dispute settlements. The report finds that Myanmar still hasalong way to go for this industry to be sustainable as factory workers continue to bear the brunt of an extremely competitive global market. Further, the report calls on the National League for Democracy-led Government and factory owners to implement measures that provide forabetterment of working conditions and the protection of the rights of workers.
When: 1 December 2016 | 2:00-4:00 PM
Where: Best Western Green Hill Hotel, No. 12, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Progressive Voice isaparticipatory, rights-based policy research and advocacy organization that was born out of Burma Partnership. Burma Partnership officially ended its work on October 10, 2016 transitioning toarights-based policy research and advocacy organization called Progressive Voice.